Mofomamy oatmeal miaraka amin'ny paoma sy voaloboka | Recipe ao an-dakozia
Tao an-trano dia lasa nahazatra anay ny mahandro tsindrin-tsakafo tsy nasiana siramamy na siramamy kely na dia izany aza tsy mahafoy ny kilasika izahay indraindray. ATSINANANA mofomamy oatmeal miaraka amin'ny paoma sy voaloboka Iray amin'ireo farany nanandramana anay. Mofomamy azonao ampidirina amin'ny sakafonao, na dia vegan ianao.
Tsy mofomamy spaonjy ity; Mofomamy spaonjy matevina izy io. Mofomamy misy siramamy farafahakeliny, izay ampiana paoma sy voaloboka mamy. Na tokony, raha misafidy ianao karazana mamy sy sombina masaka. Aza matahotra mampiditra paoma roa raha tsy dia lehibe loatra!
Sakafo maraina fisotro izany rehetra ilainao ny mandray andraikitra. Tsy mofomamy miakatra be, fa ampy ho an'ny olona 6 mankafy silaka iray. Ary tsara kokoa raha volontsôkôla be izy io satria manomboka amin'ny andro faharoa fitahirizana dia mihamafy. Sahy manomana azy ve ianao?
Ity mofomamy oatmeal miaraka amin'ny paoma sy ny voaloboka ity dia tsy dia misy siramamy firy ary mety indrindra ho sakafo maraina na handehananao hiasa ary hankafizanao maraina amin'ny kafe.
Lafarinina lafarinina iray kapoaka 1 kapoaka
Oaka voahodina 1 kaopy
Panela 2 sotro fihinanana
½ amin'ny masirasira simika
Zava-pisotro oaka na amandy 1 kaopy
Paoma kely sy masaka 2
Manafana ny lafaoro hatramin'ny 180ºC izahay ary manosotra na manisy lasitra.
Avy eo, tao anaty vilia iray, afangaro ireo akora maina: lafarinina, oaka, siramamy, masirasira, kanelina sy voaloboka. Azonao atao izany amin'ny spatula na sotro.
Raha vao mifangaro, manampy ronono sy menaka izahay ary mifangaro indray mandra-pahatongantsika ny koba homogeneous.
dia Araraka ao anaty lasitra ny koba ary apetrantsika eo amboniny ny paoma voahitsakitsaka ary notapahina ho ampahany, tsindriana kely izy ireo mba hampidirana azy ireo amin'ny ampahany amin'ny koba.
Maka amin'ny lafaoro izahay ary mahandro mandritra ny 35 minitra. Izahay dia manamarina raha vita tsara izany ary raha izany dia vonoinay ny lafaoro ary avelao izy hipetraka mandritra ny 30 ora ao anaty lafaoro iray ihany ary mihidy ny varavarana.
Mamita, Arotsaho eo amin'ny talantalana ny mofomamy oatmeal ary avela hangatsiaka tanteraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » vilia » Postres » Mofomamy oatmeal miaraka amin'ny paoma sy voaloboka